Amagama axhasayo okuthuthuzela ukuswelekelwa ngumntwana - Amagama Onduduzo Emva Kukufa
Amagama axhasayo okuthuthuzela ukuswelekelwa ngumntwana
Ingaziva kunzima ukwazi ukuba nini kwaye kanjani ukuxhasaumntu olahlekelwe ngumntwana. Ngokuhlonela, ukwazi ixesha lokufikelela, kwaye uqaphele into oyithethayo, unganika umhlobo wakho, ilungu losapho, okanye umntu omaziyoamazwi entuthuzelongeli xesha libuhlungu kakhulu.
Amagama enduduzo ngokulahlekelwa ngumntwana
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni xa unxibelelana nomntu olahlekelwe ngumntwana kukuba kuya kufuneka wazi ukuba uza kubafumana nini kwaye njani ngokufanelekileyo. Ngabahlobo abasenyongweni kunye namalungu osapho, kungcono ukufikelela ngokukhawuleza ngaphandle kwexesha losuku, ngelixa unabantu obaziyo, ungalinda iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba uthethe nantoni na okanye ungalinda de ubabone buqu ukuba awunayo iinkcukacha zabo zonxibelelwano.
Iingcamango zamatye aBantwana
Abahlobo abasondeleyo kunye naMalungu oSapho
Amalungu osapho okanye abahlobo abasondeleyowaphulukana nokukhulelwa, usana, umntwana omncinci, okanye umntwana osele ekhulile, ukufikelela kubo kunokubanceda bazive bexhaswa ngeli xesha libuhlungu kakhulu. Ungaqwalasela ukuthi:
Amagama awakwazi ukuchaza indlela endivakalelwa ngayo kuwe ngeli xesha. Sonke siza kuphoswa (faka igama lomntwana). Ndilapha nantoni na oyifunayo.
Ukusuka kusapho lwethu ukuya kolwakho, asinakukuxelela ukuba siza kuphulukana kangakanani (faka igama lomntwana). Ngokwenene wayengumntwana omangalisayo esiziva sinembeko yokuba simazi.
Nangona (faka igama lomntwana) bekukho kubomi bethu kuphela (faka ixesha elininzi), andinakuxelela ukuba ndimthande kangakanani. Ndilapha ukukuxhasa rhoqo.
Ndiyabulela kakhulu ukuba undivulele ngokuphuma kwesisu. Ndiyazi ukuba andinakwenza nto ukwenza oku kube ngcono, kodwa ndilapha kuwe nantoni na oyifunayo nanini na.
Ndinqwenela ukuba ndingathetha okanye ndenze into yokwenza oku kube ngcono. Ndilapha ukuze ndikuxhase kwaye ndifuna ukwazi ukuba kulungile ukuba ndiphinde ndakujonga kwakhona ngomso.
Amagama akanakubonisa ukuba ndibuhlungu kangakanani ngokusweleka konyana / kwentombi yakho. Ndiziva ndiwongekile ngokuchitha ixesha kunye naye kwaye ndiza kumkhumbula yonke imihla. Ndonwabile ukukunceda ngayo nayiphi na into oyifunayo, nokuba kungokuhlwa, ukucoca, ukuhlamba iimpahla, okanye ukuboleka indlebe, ndilapha kuwe nokuba ungathini.
Andikwazi nokuqala ukubonisa indlela ekubi ngayo kwaye ndinqwenela ukuba awuzukuya kule nto. (faka igama lomntwana) wayengoyena mntwana umangalisayo kwaye ndiyazi ukuba uya kukhunjulwa ngokunzulu. Nceda undazise xa kukho into oyifunayo. Ngaba kulungile ukuba ndinokungena kamva?
Kubantu ongasondelelananga nabo, kodwa onqwenela ukufikelela kubo, ungaqwalasela ukuthi:
Ndilusizi ukuva ngokusweleka konyana / kwentombi yakho. Yazi ukuba kukho into oyifunayo, ndilapha ngenxa yakho.
Nangona ndingazange ndadibana (faka igama lomntwana), ndivile ukuba wayemangalisa kangakanani. Ndiyathemba ukuba awuthandabuzi ukufikelela kuyo nayiphi na into oyifunayo ngeli xesha.
Ndaba lusizi ndakuva ngokulahleka konyana / kwentombi yakho. Ukuba ufuna umntu oza kuthetha naye, ndilapha ukuboleka indlebe.
Ndiyabulela kakhulu ukuba wabelana malunga nelahleko yonyana / intombi yakho kunye nam. Ndazise ukuba kukho nantoni na endinokuyenza ukunceda ngeli xesha.
Amagama enduduzo ngokulahleka kweNtombi okanye uNyana okhulileyo
Ukuphulukana nomntwana, nokuba ungakanani ubudala, kubuhlungu kakhulu kubazali (ngabazali). Ukuba kukho umntu omaziyo ophulukene nentombi yakhe okanye unyana wakhe, ungacinga ukuba uthi:
Ndilusizi ukuva ngokusweleka konyana / kwentombi yakho. Babelukhanyiso lokwenene ebomini bethu kwaye nosapho lwethu luya kubaphosa yonke imihla. Nceda undazise xa kukho into oyifunayo - lonke usapho lwethu lulapha ngenxa yakho.
Ndibuhlungu kukuba (faka igama lomntwana) usweleke. Wayengumntu omangalisayo oya kukhunjulwa ngabaninzi.
Ngelixa bendingazi (faka igama lomntwana) kakuhle- ndive kuphela izinto ezintle ngaye. Ndiyazi ukuba wayengumntu omangalisayo notsale wonke umntu. Nceda undazise endinokukwenza ukunceda.
Amagama awakwazi ukubonisa indlela endibuhlungu ngayo ngokuva (faka igama lomntwana) ukudlula kwakutshanje. Wayengumntu omhle owayenobabalo kubo bonke abantu abamngqongileyo. Nceda ufikelele nanini na ukuba ufuna ukuthetha okanye ufuna nantoni na.
(faka igama lomntwana) yeyona nto ibalaseleyo, kwaye ayilunganga kwaphela le yenzekileyo. Ndikuthanda kakhulu kwaye ndilapha kuyo nantoni na oyifunayo.
Ungamxhasa njani umntu olahlekelwe ngumntwana
Ngaphandle kokudibanisa ngamagama, unokubonisa lo mntu ukuba uyamxhasa. Gcina ukhumbula ukuba ukusweleka komntwana kuhlala kungamava abuhlungu kumzali (kubazali), nakwamanye amalungu osapho. Unokucinga malunga:
Thumela ikhadi lovelwano okanye lovelwano kwaye ubhale into ngokusuka entliziyweni.
Yiba nabo ngokweemvakalelo kwaye rhoqo, hayi kwangoko emva kwelahleko.
Ngena nabo kwisicatshulwaokanye umnxeba. Soloko ukhankanya ukuba xa bengakulungelanga ukuthetha ngokukhululekileyo, akukho mfuneko yokuba baphinde babuye kwaye ujonge kubo.
Thumela ukutya kunye nokutya okunokuthi kube ngumkhenkce ngokulula.
Cela ukubenzela imisebenzi yasekhaya. Ngalo lonke ixesha qaphela ukuba akukho mfuneko yokuba bathethe nawe ngeli xesha xa bengaziva, kwaye unika nje uncedo lwakho.
Thumela ngaphezulu kweentyatyambo ezizithandayo.
Ezinye iinkampani zinayo izixhobo zokulahlekelwa lusana enokuthengwa njengesipho.
Jonga ukuba unganceda na nabanye abantwana kunye / okanye izilwanyana ukuze bathathe ixesha ngokwabo.
Yintoni ongamele uyithethe kumzali osentlungwini
Xa uthetha nomntu, zama ukukhumbula ulwimi lomzimba kunye neempawu zomlomo. Abanye abantu, ngakumbi ngexesha lenkxwaleko, banokuba namandla aphantsi okanye banokuziva bengakhululekanga ukuvakalisa xa bengakulungelanga okanye bafuna ukuthetha ngelahleko yabo. Xa kuziwa kwinto ongafanele uyenze:
Kuphephe ukuthetha malungangokwakho- ubakho ngokwenene.
Zama ukungazisi inkolo nangayiphi na indlela.
Musa ukubanyanzela ukuba bakhale okanye basabele ngendlela ethile okanye ngexesha elithile. Khumbula wonke umntu ukuba usizi ngendlela eyahlukileyo kwaye ngexesha lakhe.
Ungazami ukunxiba nantoni na iswekile, khanyisa imeko, okanye uzame ukuqonda ukuba kutheni le lahleko yehle kubo.
Ungathethi ukuba uyazi okanye unokucinga ukuba uziva njani lo mntu. Inokuwanciphisa amava abo kwaye ibeke ingqalelo kuwe, xa inkxaso yakho epheleleyo kufuneka ijolise kubo.
Amagama athuthuzelayo omntu olahlekelwe ngumntwana
Nokuba uthetha nomntu osenyongweni naye, okanye umntu oqhelene kakhulu, cingisisa malunga nento oceba ukuyithetha. Ukubonelela ngentuthuzelo nenkxaso ngeli xesha kunokuba nentsingiselo emangalisayo kumntu okanye kusapho oluswelekelwe ngumntwana.
Ikati Care Ngaphakathi Design Styles Iholide Costumes Ukukhempisha, Hiking, Backpacking Gear And Equipment Izixhobo Zeski Izixhobo
bayavunyelwa ootitshala ukuba bathathe ifowuni yakho
bacinga ntoni abafana xa bekujongile
indlela yokukhupha amatye eyadini
unjani umphathi kamorgan ukunambitha
ubude obuphakathi kwintombazana eneminyaka eli-16 ubudala
Imisebenzi yeminyaka eyi-16 engenamava